လေဖြတ်ထားတဲ့လူနာရဲ့ မိသားစုကို ဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးပေးမလဲ - Hello Sayarwon
လေဖြတ်ထားတဲ့လူနာရဲ့ မိသားစုကို ဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးပေးမလဲ
လေဖြတ်ရောဂါဟာ ကာယကံရှင်လူနာကိုသာမက ၎င်းရဲ့မိသားစုကိုပါ အခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့စေပါတယ်။ အကယ်၍ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျပြီး သင့်မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ယောက် လေဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် လူနာအတွက်၊ မိသားစုအတွက် ဘာတွေဆောင်ရွက်သင့်သလဲဆိုတာ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖတ်ရှူလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
လေဖြတ်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအကြောင်း လေ့လာထားပါ
လူတစ်ယောက်ဟာ လေဖြတ်ရာကနေ သက်သာလာနိုင်ပေမယ့် ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ ခံစားရတတ်ပြီး ဒီပြဿနာတွေက ကာယကံရှင်ကိုရော မိသားစုကိုပါ ရိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။
ရောဂါပြင်းထန်မှုအတိုင်းအတာ၊ ဦးနှောက်သွေးပြတ်လပ်တဲ့ အချိန်ကာလ၊ ထိခိုက်သွားတဲ့ ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းတွေအပေါ် မူတည်ပြီး လူနာဟာ ယာယီ သို့မဟုတ် တစ်သက်လုံး ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းဘဲ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
လှုပ်ရှားရခက်ခဲခြင်း – လေဖြတ်လူနာဟာ ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခြမ်း အားနည်းခြင်း၊ ကြွက်သားများ မလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းစတဲ့ ပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ မျက်နှာတစ်ခြမ်း သို့မဟုတ် လက်မောင်းတစ်ဖက်က ကြွက်သားတွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်တော့တာမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။
စကားပြောရခက်ခြင်း၊ မျိုချရခက်ခြင်း – လေဖြတ်ခြင်းကြောင့် ပါးစပ်နဲ့ လည်ချောင်းက ကြွက်သားအချို့ကို မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘဲ စကားပီပီသသ မပြောနိုင်ခြင်း၊ ပုံမှန်အတိုင်း အစာ/ရေ မမျိုနိုင်၊ မစားနိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အပြင် စာမဖတ်နိုင်၊ စကားနားမလည်နိုင်၊ စာမရေးနိုင်တော့တဲ့အထိ အခြေအနေဆိုးတတ်ပါတယ်။
မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်း၊ တွေးခေါ်ဆင်ခြင်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ – လေဖြတ်ထားတဲ့လူနာဟာ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ခံစားရဖို့ အလားအလာရှိပါတယ်။ အရင်ကလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အရာတွေကို မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အတွက် သူ့ကိုယ်သူ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးတစ်ခုသဖွယ် ထင်မြင်လာတတ်သလို ချစ်သူခင်သူ၊ သူငယ်ချင်းများနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာလည်း အဖုအထစ်တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
နာကျင်မှု – လေဖြတ်ခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်ထိခိုက်ပြီး နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ထုံခြင်း၊ ခန္ဓါကိုယ်ခံစားမှု ပြောင်းလဲခြင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
လေဖြတ်လူနာရဲ့ မိသားစုဝင်တွေဟာ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးဒဏ်တွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကာယကံရှင်ရဲ့ခံစားချက်ကို နားမလည်နိုင်ဘဲ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ဖိစီးမှုများပြီး စိုးရိမ်ပူပင်နေလေ့ရှိပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ မိသားစုထဲ နာမကျန်းသူတစ်ယောက် ရှိနေခြင်းဟာ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ် ခက်ခဲကြတာချည်းပါပဲ။ သင့်အနေနဲ့ အခြားသောမိသားစုဝင်တွေကို အောက်ပါနည်းလမ်းတွေနဲ့ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးကုသသူ၊ စကားပြောကုထုံးပညာရှင်တွေက သင်နဲ့သင့်မိသားစုကို ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီပညာရှင်တွေက လူနာနေကောင်းလာအောင် ပြန်လည်ထူထောင်ပြုစုရာမှာ ပါဝင်နိုင်သလို မိသားစုဝင်တွေရဲ့ အတွေးနဲ့ခံစားချက်တွေကို ထိန်းညှိပေးရာမှာလည်း ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးအုပ်စုမှာ လေဖြတ်လူနာရှိသည့် မိသားစုများ၊ ဆရာဝန်၊ သူနာပြုနဲ့ အခြားသက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးက ပညာရှင်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလိုအုပ်စုတစ်ခုခုမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့် လူနာနဲ့ မိသားစုအတွက် အသုံးဝင်မယ့် အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေ ရရှိလာနိုင်သလို သင့်မိသားစုမှာဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေအကြောင်း ရင်ဖွင့်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်မိသားစုလိုပဲ တူညီတဲ့အခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခြားမိသားစုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ သိလာရသလို သင့်အခက်အခဲတွေကို နားလည်ပေးနိုင်သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောရတဲ့အတွက် စိတ်အားတက်ကြွပြီး စိတ်သက်သာရာရလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်က ပညာရှင်မဟုတ်ပေမယ့် နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးအုပ်စုမှာ သင့်မိသားစုဝင်အားလုံးကို ပါဝင်စေခြင်းအားဖြင့် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
သင်အပါအဝင် သင့်မိသားစုဝင်အားလုံးဟာ ကာယကံရှင်လူနာရဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ပဓါနကျတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မိသားစုဝင်တွေကို ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းပါ။ သင့်အနေနဲ့ လူနာရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာ ပါဝင်ကူညီပေးနိုင်သလို ဘာလုပ်သင့်တယ်၊ ဘာမလုပ်သင့်ဘူး စသည်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာလည်း ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ လူနာကို ဆေးရုံဆေးခန်း ခေါ်သွားပေးခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အစီအစဉ်မှာ ရံဖန်ရံခါပါဝင်ခြင်း၊ ၎င်းအစီအစဉ်မှာ သင်ယူခဲ့သည်များကို အိမ်မှာပြန်လေ့ကျင့်နိုင်အောင် ကူညီပေးခြင်း စတာတွေဟာ လူနာအတွက် သင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အထောက်အပံ့ကောင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုဝင်အားလုံး တာဝန်ကိုယ်စီယူကြမယ်ဆိုရင် အရာအားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ့လာပါလိမ့်မယ်။
သင်ကိုယ်တိုင် ကျန်းမာရေးမကောင်းရင် သင့်မိသားစုကို စောင့်ရှောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေစားပါ၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ၊ အိပ်ရေး၀၀အိပ်ပါ။ သင့်မိသားစုဝင်တွေကိုလည်း အစားအသောက် ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊ အိပ်ချိန်မှန်အောင် ဂရုစိုက်ပေးခြင်း၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း အတူတူလုပ်စေခြင်းအားဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးပါ။ ဒီလိုဆိုရင် သင့်မိသားစု ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသမျှ အခက်အခဲအားလုံးကို အချိန်တိုအတွင်း ကျော်လွှားနိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။
မိသားစုဝင်တစ်ယောက် လေဖြတ်ဝေဒနာ ခံစားရတဲ့အခါ ကျန်မိသားစုဝင်တွေမှာ ဒီအရေးပေါ်အခြေအနေရဲ့ ဖိအားဒဏ်ကို ခံကြရသလို အရာအားလုံး ကသောင်းကနင်းဖြစ်ပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရင်ဆိုင်ရသမျှ အခက်အခဲတွေကို အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီး အားလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Stroke. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stroke/symptoms-causes/dxc-20117265. Accessed May 5, 2017.